Gudigga Doorashooyinka Galmudug ayaan lafilayaa in saacadaha soo socda si rasmi ah ugu dhawaaqaan Liiska Xildhibaanada Ahlusunna | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Gudigga Doorashooyinka Galmudug ayaan lafilayaa in saacadaha soo socda si rasmi ah...
Gudigga Doorashooyinka Galmudug ayaan lafilayaa in saacadaha soo socda si rasmi ah ugu dhawaaqaan Liiska Xildhibaanada Ahlusunna
Gudigga Doorashooyinka Galmudug ayaan lafilayaa in 24-ka saac ee soo socda ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan Liiska Xildhibaanada Ahlusunna ee dhowaan ay soo Gudbiyeen madaxda Ahlusunna Waljamaaca.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Xubnaha guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ay sirasmi ah ugu dhawaaqaan liiska Xubnaha Baarlamaanka Galmudug laga siiyey Xildhibaannada Galmudug oo ay dhawaan soo gudbiyeen hoggaanka Ahlusunna.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in Ra’iisul Wasaaraha Soomaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku amray Xubnaha guddiga doorashooyinka inay shaaciyaan liiska 20-ka Xildhibaan ee Ahlusunna laga siiyey Baarlamaanka Galmudug.
Xalay ayaa qorshuhu ahaa in Guddiga ay ku dhawaaqaan liiska Xildhibaannada Ahlusunna balse ay dib u dhacday,iyada oo Sheekh Shaakir oo kamid ah hoggaanka Ahlusunna laga sugayey in Magacyada Xubnaha oo saxiixan in uu ku wareejiyo Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Galmudug.
Weli waxaa jira Beelaha qaar ee dega deegaannada Galmudug oo diidan Xubnaha Baarlamaanka Galmudug laga siiyey Ahlusunna, iyaga oo sheegaya in Xubnihii ay lahaayeen la siiyey Urur gaar ah.